तीतो मीठो | गृहपृष्ठ | Page 5
सरकारले चैत महीनातिर फेरि लगानीकर्ताको भेला गर्दै छ । त्यहाँ थुप्रै लगानीका प्रतिबद्धता आउनेछन्, सम्झौता हुनेछ...
नेपालको विकासै भएन रे । किन नभएको त भन्दा देश कति वर्षमा कहाँ पुग्ने भनेर बाटो नै स्पष्ट छैन रे । किनकि जसले ब...
भ्रष्टाचारमा देशले प्रत्येक वर्ष प्रगति गर्दै गैरहेको कुरा अब सामान्य ज्ञान भैसक्यो । त्यसकारण छेउ टुप्पो समाउ...
डाभोसमा उर्लिनुभो ओली
स्वीट्जरल्यान्डको डाभोसमा विश्व आर्थिक मञ्चको फोरमको वार्षिक बैठक सम्पन्न भयो । त्यसमा विश्वभरिका थुप्रै सरकार...
साँडे जुधाएर सकियो माघे संक्रान्ति २०७५ । तर यता सरकारले बनाएको नयाँ मर्यादाक्रम नमिलेको भनेर एक अर्काबीच गोरु...
एकादेशका प्रधानमन्त्री एकपटक स्वर्ग पुगेछन् । जिउँदै छँदा स्वर्ग कस्तो रहेछ भनेर हेर्न मन लागेर स्वर्गको ढोका...
कर्पोरेट गभर्नेन्स् अर्थात् संस्थागत सुशासनको नयाँ परिभाषा खोज्ने बेला आएको छ । पहिले कर्पोरेटहरूले आफ्नो सुशा...
on: १४ बैशाख २०७५, शुक्रबार ०७:४६ तीतो मीठो
यसपालि पनि प्रम ओली पहिले चीनतिर नगई भारततिरै गए । के गर्नु काठमाडौंमा जाडो अझै सकिएको छैन यो वर्ष । बालुवाटारबाट निस्केपछि पाइला त उत्तरभन्दा दक्षिणतिरै जाँदो रै’छ । घाम दक्षिणकै प्यारो । त...	बिस्तृतमा
on: २३ चैत्र २०७४, शुक्रबार ०७:२७ तीतो मीठो
चारैतिरबाट माग आएपछि अर्थमन्त्री (अम)ले श्वेतपत्र भनेर एउटा वक्तव्य निकाले । श्वेत अर्थात् सेतो । तर वास्तवमा त्यो त कालोपत्र भनौं वा श्यामपत्र पो रहेछ । किनकि श्वेतपत्रमा व्यापारी, लगानीकर्...	बिस्तृतमा
यूरोपियनहरुले त नेपाललाई निकै पो हेपे त बा ! यसरी नेपालीलाई यति धेरै ठाडै न्याँकेको, ड्याँकेको र अझ अपमानित गरेको शायद पहिलो पटक नै हो । यो त अति भयो । त्यसैले, बोली शिरोमणि हाम्रा प्रधानमन्...	बिस्तृतमा
अहिले समृद्धिको नारा निकै खपतमा छ बजारमा । के वाम, के काङ, के गाविस, के प्रदेश, के दशैं, के नयाँ वर्ष, के गोष्ठी, के कुनै समाचार कक्ष, सबै मौसम, सबै तहका नेता, दल, अर्थशास्त्री सबैको एउटै ना...	बिस्तृतमा
विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपति पड्काइन्, केपी ओलीले प्रममा दुई तिहाइभन्दा बढी विश्वासको मत पाए । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आआफ्ना सरकार पाए । प्रतिनिधिसभाले सभामुख र राष्ट्रिय...	बिस्तृतमा
खैरोपत्र खै त अर्थमन्त्रीज्यू ?
on: २५ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०६:३३ तीतो मीठो
नयाँ सरकार आएपछि अर्थतन्त्र माथि उक्लेला भनेको त नहुने भयो । अघिल्लो सरकारले ७ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हुने भनेको थियो । तर, यो सरकारले ६ प्रतिशत मात्रै गर्दिने रे । अर्थतन्त्रको मध्याव...	बिस्तृतमा
जसै प्रम ओलीले नयाँ मन्त्रीहरु नियुक्त गरे, मानिसहरुको विकासे आशाको ग्राफ पनि ह्वात्तै माथि गयो । सामाजिक सञ्जालका भित्ता अर्थतन्त्रमा सुधार आउने रुमानी सपनाले भरिए । देशलाई समृद्धिको ६ लेनक...	बिस्तृतमा
on: ११ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०७:३८ तीतो मीठो
देश नेतामय भएको छ । केन्द्रमा नेता । प्रान्तमा नेता । स्थानीय तहमा नेता । त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश जताततै मन्त्री नै मन्त्री । भलै मन्त्री पनि नेता नै हुन् र नेता पनि मन्त्रीजस्तै हुन् । यसर...	बिस्तृतमा